छबी शिल्पाको कथाले लियो नयाँ मोड, यत्रो बर्ष पहिलो श्रीमती हेमा काहा थिइन ? [भिडियो हेर्नुहोस] – दैनिक नेपाल न्युज
छबी शिल्पाको कथाले लियो नयाँ मोड, यत्रो बर्ष पहिलो श्रीमती हेमा काहा थिइन ? [भिडियो हेर्नुहोस]
चलचित्र निर्माता छविराज ओझाविरूद्ध बहुविवाहको उजुरी परेको छ।उनकी पत्नी हेमा ओझाले आइतबार महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा छविविरूद्ध बहुविवाहको उजुरी हालेकी हुन्। उजुरीमा हेमाले आफूहरूबीच २०४१ सालमा विवाह भएको उल्लेख गर्दै छविले फेरि अर्की विवाह गरेको बताएकी छन्। पछिल्लो समयमा नायिका शिल्पा पोखरेलसँग छविविरूद्ध घरेलु हिंसाको मुद्दा हालेकी थिइन्।
‘घरमा श्रीमती म हुँदाहुँदै छोरी भन्न सुहाउने उमेरकी शिल्पा पोखरेलसँग म यो जाहेरी लिई उपस्थित भएकी छु,’ हेमाले भनेकी छन्। उनले छवि र शिल्पा दुबैलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्न अनुरोध गरेकी छन्। नयाँ मुलुकी संहिताअनुसार बहुविवाह गर्ने पुरूष र महिलालाई १ देखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुनसक्छ। भिडियो हेर्नुहोस।
नेपाल चेम्बर र जर्जिया चेम्बरबीच आर्थिक अभिवृद्धि गर्ने समझदारी
स्वतन्त्रता खोस्ने विधेयक नसुधारे आन्दोलन गर्छौँः सभापति देउवा